ခွဲစိတ်လူနာဌာန (Surgical Unit)
ခွဲစိတ်လူနာဌာနတွင် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း ဦးစီး၍အဖွဲ့ (၂)ဖွဲ့ ဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသပေးနေပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင် General Surgery လူနာပေါင်း(၉၂၇)ယောက်ခွဲစိတ်ကုသ၍ Minor Surgery (၅၆၅)ယောက် ကုသမှုခံယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ (မှတ်ချက် – ၂၀၁၅ခုနှစ်စာရင်းအရ)
၁၀. ဒေါက်တာဒေါ်စုမြတ်နိုင်နှင့် အခြားလက်ထောက်ဆရာဝန်များဖြင့် ကုသပေးလျှက်ရှိပါသည်။
အထွေထွေဆေးကုသဆောင် (Medical Ward)
အထွေထွေဆေးကုသဆောင် (Medical Ward) တွင် သမားတော်ကြီးဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် မှ ဦးစီး၍ဆေးကုသမှု ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။
အထွေထွေဆေးကုသဆောင် (Medical Ward) တွင် –
၄. ဒေါက်တာဦးဇော်လှထွန်းတို့ အပြင်လက်ထောက်ဆရာဝန်များနှင့် ဆေးဝါးကုသပေးလျှက်ရှိပါသည်။
အများဆုံးကုသရသောရောဂါများမှာ – ဆီးချို ၊ သွေးတိုး ၊ နှလုံး ၊ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ ၊ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါ ၊ဖျားနာရောဂါနှင့် အခြားရောဂါအမျိုးမျိုးပါဝင်ပါသည်။
သားဖွားနှင့် မီးယပ်ကုသဆောင် (OG Ward)
သားဖွားနှင့် မီးယပ်ကုသဆောင် (OG Ward)တွင် သားဖွားနှင့် မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန် ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ဝင်းကြူ မှဦးဆောင်၍ ဆေးကုသမှုပြုလုပ်နေပါသည်။
သားဖွားနှင့်မီးယပ်ကုသဆောင်(OG Ward)တွင် –
၁. သားဖွားနှင့် မီးယပ်အထူးကုဒေါက်တာဒေါ်ခင်ဝင်းကြူ
၂. သားဖွားနှင့် မီးယပ်အထူးကုဒေါက်တာဒေါ်မြမြသိန်း
၄. သားဖွားနှင့်မီးယပ်အထူးကုဒေါက်တာဒေါ်ကျင်မြင့် လှ
၁၁. သားဖွားနှင့်မီးယပ်အထူးကုဒေါက်တာဒေါ်ခိုင်ယဉ်တင့်စသည့် ဆရာဝန်များဖြင့် ဆေးဝါးကုသပေးလျှက်ရှိပါ
ရိုးရိုးမွေးလူနာ (Normal Labous)နှင့် LSCS (ခွဲစိတ်မွေးလူနာ), TAH & BSO (သားအိ်မ်ခွဲထုတ်ခြင်း) စသဖြင့်အမျိုးသမီးနှင့်ပက်သက်သောရောဂါအားလုံးကိုကုသပေးလျှက်ရှိပါသည်။ လိုအပ်လျှင် Chemotherapyနှင့်Radiotheraphy (ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်ကုသခြင်း) များလည်း ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသိုပို့ ဆောင်ပေးပြီးတာဝန်ယူကုသပေးလျှက်ရှိပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင်ဆေးရုံတက်၍ကုသသောလူနာဦးရေပေါင်း(1018)ယောက်ရှိပါသည်။
မျက်စိကုသဆောင် (Eye Ward)တွင် မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးကိုကိုတင်မှ ဦးဆောင်၍ကုသပေးလျှက်ရှိပြီး ဒေါက်တာဒေါ်ထွေးသန္တာရီမှ ကူညီ၍ ကုသမှုများပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ မျက်စိနှင့်ပက်သက်သောခွဲစိတ်မှုအမျိုးမျိုးကိုကုသပေးလျှက်ရှိပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင်ဆေးရုံတက်၍ကုသသောလူနာပေါင်း(277)ယောက်ရှိပါသည်။
၂. စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဦးမောင်ကိုတို့ အပြင်
၄. ဒေါက်တာာဦးကြည်ဟန်(ခေတ္တအနားယူ)နှင့် အခြားလက်ထောက်ဆရာဝန်များဖြင့် ဆေးကုသမှု ပြုလုပ်ပေး လျှက်ရှိပါသည်။
အထွေထွေပြင်ပလူနာဌာနတွင် သွားနှင့်ခံတွင်းကုသဌာနလည်းရှိပါသည်။ ထိုဌာနတွင်
၃. ဒေါက်တာသဉ္ဖာဟန်ချိုဦးတို့ဖြင့် ကုသပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ဤဌာနကိုရောဂါဗေဒဆရာဝန်ဒေါ်တာစုလဲ့ဌေးမှ ဦးစီး၍ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးပေးပါသည်။ လိုအပ်လျှင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးနှင့် အခြားဓါတ်ခွဲခန်းများသို့ ပို့ ၍ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေပါသည်။ (ဥပမာ-TSH အစရှိသဖြင့်)
ဓါတ်မှန်နှင့် Ultrasound ဌာန
၅. ဓါတ်မှန်ရိုက်သူ(ဒုတိယတန်း)ဒေါ်ဝါ၀ါမြင့် စသည်တို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြပါသည်။
အသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်သော Haemodialysis ဌာန
၂. ဒေါက်တာဒေါ်ဇာခြည်ထွန်းတို့ မှဦးစီး၍ (ကျောက်ကပ်တုဖြင့်သန့် စင်ခြင်း) Haemodialysis ဖြင့် ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။
အပတ်စဉ်လူနာပေါင်း(၃၆)ယောက်ကိုကုသပေးနေပါသည်။ လူနာတစ်ယောက်တစ်ကြိမ်ကျောက်ကပ်တု သန့် စင်ခြင်းပြုလုပ်လျှင် ငွေကျပ် (၃၀၀၀၀ိ/- မှ ၄၀၀၀၀ိ/-) အထိကုန်ကျပါသည်။ လူတစ်ဦးအားအနည်းဆုံး (၄) နာရီကြာမျှကျောက်ကပ်တုဖြင့်ဆေးကြောပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောက်ကပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ (Nephrologicst) မှလွဲပြောင်းပေးသောလူနာများကိုသာ ကုသပေးပါသည်။
ဤဆေးရုံတွင် အထက်ပါဆေးကုသမှုများကို မရှိဆင်းရဲသားများအားအခကြေးငွေလုံးဝမယူဘဲ ကုသပေးနေပါ သဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအလှူရှင်များ စေတနာထက်သန်စွာပါဝင်လှူဒါန်းကြပါရန် အနူးးအညွတ်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ဤဆေးရုံအတွက် ဆေးဝယ်ယူရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံတင်ဒါစနစ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံဆေးကုမ္ပဏီ(၃-၄)ခုမှလည်းကောင်း၊ဈေးစုံစမ်း၍အထိရောက်ဆုံးဈေးကိုအသက်သာဆုံးဈေးဖြင့် လည်းကောင်း၊တစ်ကြိမ်ဝယ်ယူလျှင်၆လစာဝယ်ယူလေ့ရှိပါသည်။ ဤသို့ ဖြင့်ဆေးရုံအတွက်ဆေးများကိုအသက်သာဆုံးဖြစ်အောင်စီစစ်၍၀ယ်ယူလေ့ရှိပါသည်။
ဤဆေးရုံတွင်ဆေးကောင်တာ၂ခုဖြင့်လူနာများကိုဆေးပေးလေ့ရှိပါသည်။ ဆေးကောင်တာ၂ခုမှာ ပြင်ပလူနာဌာနတွင်တစ်ခု၊ ရုံးခန်းတွင်တစ်ခုရှိပါသည်။ ဆေးစာရင်းများကို (Computer Software) စနစ်ဖြင့် ထားရှိပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့်ပြထားသောလူနာများကိုဆေးမှတ်တမ်းဖြင့် Computer ဌာနတွင် ဘောက်ချာဖြတ်ပြီး ဆေးကောင်တာတွင်ဆေးထုတ်ပေးဖြင်းဖြစ်ပါသည်။ နောက်တစ်ကြိမ်ဆေးပြန်လည်ထုတ်သော အခါပထမတစ်ခေါက်၏လူနာဆေးသောက်ပြီးသောဆေးခွံများကိုကောင်တာသို့ လူနာမှပြန်အပ်မှသာ နောက်တစ်ကြိမ်ဆေးပြန်လည်၍ထုတ်ပေးပါသည်။
နာတာရှည်ရောဂါ (ဆီးချို၊သွေးတိုး၊နှလုံး) အစရှိသည့် ရောဂါသည်များကို တစ်ကြိမ်လျှင်၂ပတ်စာအထိ ဆေးထုတ်ပေးပါသည်။
ရောဂါသည်များပင်ပန်းမှုသက်သာစေရန်၊ ငွေကုန်ကြေးကျ (ဥပမာ-ခရီးစရိတ်) သက်သာစေရန်၊ အချိန်ကုန် သက်သာစေရန် ရည်ရွယ်၍ဆေးများ၂ပတ်စာအထိထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၈ခုနှစ်နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးသောအချိန်တွင်ဤဆေးရုံမှဆရာဝန်များနှင့်ဆရာမများအဖွဲ့ ဖွဲ့ ၍ ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ(ဆေးရုံအုပ်)နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဝင်များဦးစီးသောအဖွဲ့ သည်ဧရာဝတီတိုင်းမြောင်းမြို့ သို့ သွားရောက်၍အသေးစားခွဲ စိတ်မှုများနှင့်ဆေးကုသမှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့ ပါသည်။ အကြီးစားခွဲ စိတ်မှုများအတွက်ရန်ကုန်မြို့ ရှိမွတ်စ်လင်မ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံသို့ လွှဲပြောင်းကုသမှုများပြုလုပ်ပေး ခဲ့ပါသည်။